Ma xiran yihiin Xaduudaha Puntland, Qaad ma yimi wali, Sidee loo fuliyey amarkii Xukuumadda?
March 29, 2020 NEWS 4
GAROOWE(P-TIMES) – Warsidaha PuntlandTimes, wuxuu dabagal ku sameeyey oo uu la xariiray dhawr goobood oo ah marinada laga soo galo ee Puntland, gaar ahaana dhinacyada Tuurdibi, Gaalkacyo & Garoowe, kuwaas oo ka mid ahaa meelaha lagu soo rogay amarada kasoo baxay wasaaradda Arrimaha gudaha Puntland oo mamnuucaya in wixii ka dambeeya 28 March aan cidna soo gali karin xaduudaha Puntland.
Warsidaha ayaa ogaaday in xalay si toos ah uga hirgalay amarkaas xaduudaha Sool & Nugaal ay wadaagan oo gaadiid badan lagu celiyey duleedka magaalada Garoowe, kuwaas oo la hayay mudo dheer, laakiin ugu dambeyntii ayaa lasii daayay sida ay sheegayaan wararku, maadaama ay kasoo dib dhaceen lixdii maqribnimo oo amarkan bilaabanayay.
Sidaas oo kale Kastamka Tuurdibi ee kudhaw magaalada Goldogob, warar ayaa noo xaqiijiyey in ay jireen dad saaka kasoo gudbay, kuwaas oo la mariyey baaritaanada Caafimadka, balse ma jirto wax xiran oo ilaa hadda la xaqiijiyey.
Qaadka ka yimaada dalka Itoobiya ayaa cabsi laga qabaa in uu soo gaaro dhulka Ciidka ee Itoobiya, oo ku dhaw xaduudaha gobalka Mudug, haddii ay taasi dhacdana wuxuu si fudud ku soo gaarayaa magaalada Gaalkacyo.
Halka, sida buuxda uga hirgalay amarkan ayaa ah deegaanada Sool iyo Nugaal, waxaana jira wali dad ku xaniban deegaanka Caynaba, ka dib markii ay maqleen in la xiray xaduudaha Puntland, qaarkood waxay ku qasbanaadeen in ay ku sugnaadaan ama ku nagaadaan halkaas, halka qaarkoodna ay saaka u soo jiheysteen dhinaca magaalada Garoowe.
In maanta qaad yimaadaa gudaha magaalada Gaalkacyo, waxay ka dhigan tahay in aan la fulin amarkii dawladda, gaar ahaana laamaha Ammaanka laftirkoodu aysan qeyb ka noqon sidii loo xaqiijin lahaa fulinta bad-qabka bulshada gobalka Mudug, waxaana aan wali ilgaar ah ku heynaa arrimahan.
Ilaahay umadda Soomaaliyeed ee aan haysan hannaan caafimaad oo harumarsan ha hareer mariyo cudurkan dunida halakeeyay
Waxa kale oo loo baahan yahay in la joojoiyo rakaabka ka imanaya Europe iyo North America.
Gayiga Soomaaliyeed ilaa hadda wax ugu dhintay Virus-kan ma maqal Garoowe oo aan PLtimes Ku arkay maahanee.
Qaabka loo aasayo ha laga taxadaro haduu jiro.
Dadka ka imanaya ama soo maraya dalalka cudurkaasi ka jiro ha la joojiyo imaatinkooda.
Ha loo hogaansamo awaamiirta looga hortagayo cudurkan,hana la qaato talooyinka caafimaad ee hawl wadeenada caafimaadka.
Warbaahintuna war ay hubaan ha qoraan oo xaqiiq ah,hana ka fogaadaan cabsida ay Ku abuurayaan umadda.
Foojignaan waa muhiim.
Asc waxaan rabaa inaan kahadlo webkan dadka leh waxay aad ujecelyihiin xumaanta puntland state sababta waan gan waayay anigu waxaan ahay dadka asal ahaan puntland kasoojeedo laakiin San joogon puntland aad baan uakhriyaa waana layaabaa mawaxay nacebyihiin xukumada,laakiin ogow Santa guud baa muhiim ah
War dadka iyo weebsaydyada neceb puntlaan iyo reer puntlaan kan kaliya ma aha oo way badan yahiin.Kanaana ugu roon oo an aad ugu ralax tagin wax xun ka sheega punland.kanu waa iska murcaad ma ahee saas uguma fogaado wax ka sheega puntland.
Qof iyo labo Puntland State naceyb iyo cuqdad u qaba way jiraan oo waa kuwa coronaviruska USC iyo SNM loo yaqaanno la xanuunsan. Waxaa se ka sii tiro badan inteenan kale ee ah reer Puntland dhalad ah oo ama u dhashay ama ku dhashay.
Qof Puntland asal iyo xidid ku leh oo xumo u qaadi karaa ma jiro sideeda ba. Neceybku iyo nasteexada kululi yaanay iskaga kiin qaldamin fadlan waayo nasteexada kalgacal cid mise meel loo qabo ayaa qofka ka keensada. Inteenan xukuumadda iyo hoggaanka qaniinyada kulul ku haysaa waxyaabo aynu ka dhiidhinnay ee uu kalgacaylkeena dagalkeena Puntland xamili kari waayay ayaa inoo muuuqda oo nagu kallifay in aynu cod sare ku sheegno.
Waxa aad qarsataa way ku qudhunsadaan saaxiib oo anagu ma aqbalayno in Puntland oo 20 jirsatay ay la muuqaal iyo itaal ekaato maamullada kale ee ay siyaabaha badan uga fac weyntahay. Waxa ragaadkan ku sababay waa in bannaanka la soo dhigo oo ay reer Puntland qummaati u saxaan. Puntland mansabkeedu kan Soomaaliya xataa ka sii fac weyn. Iska aamusnaada oo sidan ha lagu soo waaro damiirku ina siin waa.